Ndezvipi nzira dzaungashandisa kumashure kweEOO?
Backlinks inotora basa rinokosha mukushandura kwewebsite uye inova nemigumisiro yakawanda pakutsvaga kwejini injini. Izvo hazvina basa kana iwe une bhizinesi rekune imwe nzvimbo kana guru rekushandira, kuti uite nzvimbo yakasimba yeIndaneti unoda backlink ye SEO. Mubvunzo ndewokuti ungawana sei kumashure kumashure kwebhizimisi rako munguva pfupi? Nyaya iyi yakagadzirirwa kukubatsira kuti uone kuti ungawana sei mushandirapamwe wekuvakwa kwako wepakuvamba wakatanga.
Kuvakwa kwekutsvaga kwekune imwe nzvimbo
Kana basa rako rekuvaka zvikwiriso kune webusaiti yako yepasi, unofanira kuziva zvauri kutsvaga paunenge uchisimbisa - chapter 7 bankruptcy lawyer cost. Mamiriro ekudzokera kumashure akavakwa nechinangwa chekuvandudza webhusaiti yehutano kunzvimbo yaro.
Ongororo dzemunharaunda dzekutsvaga dzinoshanda pasi pemaitiro akadaro emunharaunda sekugadzirisa mazano ekukurukurirana, kuumba bhizinesi account muGoogle Bhizimusi BANGU, kuumba hyperlocal zvinyorwa, uye kuvaka zvigaro kune webhusaiti. Zvose izvi kugadzirisa zvinhu zvinoshandiswa pakugadza kuvapo kwebhizimusi rekutsvaga mune zvekutsvaga mukati mekutsvaga kwehupenyu zviitiko zvekuda geotargeted kutsvaga mazwi. Mushandirapamwe wako wekuvaka wekune dzimwe nyika unofanira kukupa mukana wokutaura kune vateereri vako.
Vatengesi vako vanogona kukuraira mawebhusayithi makuru uye ane kodzero sezvo ivo pachavo vanoita semabhizimisi maduku evanhu vanogona kunge varipo nemapepanhau ari nyore. Zvisinei, sezvavanenge vaine simba mune zvemabhizimusi enyu, kuwana hukama kubva kwavari kuchava mukana wakaisvonaka wekuwedzera kwekuziva kwako.
Sekutonga, mabhizimisi maduku ane zvimwe zvisingakwanisi kugadzirisa mari uye haakwanisi kuwana backlink kubva kune vaparidzi vakuru seForbes, Entrepreneur, The New York Times, nevamwe. Panzvimbo payo, bhizimusi rekushandisa rinogona kubatsirwa nekudhinda zvinyorwa zvadzo pamunharaunda yemagariro, maBlog akazvipira kumabasa emunharaunda kana zvinyorwa zvemashoko.
Pamusoro pepakati pemushandirapamwe wenyu wekuvakwa, unogona kutanga kuvaka zvinyorwa uye kururamisa mashoko iwe uripo iye zvino.
Mhedzisiro yakakwana kumabhizimisi mashoma sezvavanopa mano ekuisa ruzivo rwekufambisa kune imwe nzvimbo uye kukupai mukana wekuisa chibvumirano pane zvimwe zvinyorwa zvinovimbwa zvewebhu zvisina kubatanidzwa mumabasa ekunyengera epamamera uye zvinogona kusvika vashandisi vepakati kana vakatarisa nekunyoresa kushandiswa kutsvaga mazwi. Chinangwa chekutanga chegadziriro iyi ndechokuti zita rako ribudiswe.
Nzira dzekutevedza sei zveSOO?
Vatengesi paIndaneti vanovaka mharaunda yeSEO yepurogiramu yekutsvaga inoda kuva yakasikwa kupfuura avo vanoita pasi rese search engine optimization kune mabhizimusi makuru nokuti mashizha anosangana munharaunda iyi anogumira. Vafiniti vepaIndaneti vari kutambura kuti vawane nzvimbo yekusagadzikana kwemashoko ekutsvaga kwemashoko ayo asina tsvina yekutsvaga.
Kana uri kutsvaga mikana yemunharaunda yebhizimisi rako, unofanirwa kunzwisisa kuti miganhu yeiyo nzvimbo yako uye inoita nzvimbo ino semamiriro ebhizimisi rako. Kuziva zvikanganiso zvako zvinokubvumira kufunga zvakakosha uye nekuramba uchiwana mikana yakakwana munharaunda yako iyo inokutungamirira iwe kunyanya kukosha kwebhizimusi rako rebhizimusi webusaiti.